Askari Jabuutiyaan Ah iyo Dad Shacab Ah Oo Lagu Dilay Degmada Jalalaqsi Ee Gobolka Hiiraan.
Sunday July 09, 2017 - 20:56:13 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dilal ay siyaaba kala duwan uga dhaceen degmada Jalalaqsi oo ay ku suganyihiin ciidamo Jabuutiyaan ah.
Goob joogayaal ayaa sheegay in Mid kamida ciidamada Jabuuti uu ku dhintay galbeedka magaalada Jalalaqsi, askariga Jabuutiyaanka ah waxaa dishay xabad si kam ah uga fakatay askari katirsan ciidanka Dowladda Federaalka oo ay wada cunayeen Maandooriyaha Khaatka.
Markii uu falka dilka ah dhacay kadib ayay ciidamada Jabuuti xabsi utaxaabeen Askarigii soomaaliga ahaa ee falka toogashada ah ugeystay Askariga Jabuutiyaanka ah.
Dhinaca kale ciidamada Jabuuti ayaa la sheegay in caawa Fiidkii ay dad shacab ah ku xasuuqeen dhanka qorraxsinka ah ee degmada Jalalaqsi.
Wararka laga helayo degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan waxey sheegayaan in ciidamada dowlada Jabuuti si bareer ah degmadaasi ugu rasaaseeyeen dad shacab ah.
Ciidamada Jabuuti ayaa rasaas oodda uga qaaday Labo wiil oo walaalo ah xilli ay Mooto saarnaayeen kuwaasi oo ku siijeeday Beer ku taala duleedka degmadaasi.
Rasaasta ayaa sababtay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca mid kale oo ah labadii wiil walaalaha ahaa ee Mootada la socotay.
Dadka shacabka ee ku dhaqan degmada oo rasaasta maqlay islamarkaana ka warhayay in wiilasha Mootada la socday ay goobta marayeen ayaa durba u cararay halka ay rasaasta ka dhacday.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Dadka Shacabka ah ee goobta ugu tagay meydka hal ruux iyo dhaawaca mid kale balse intii ay ku guda jireen iney qaadaan meydka iyo dhaawaca ayey markale ciidamada Jabuuti rasaas ku fureen dadkii halkaasi isugu yimid.
Rasaasta labaad ayaa sababtay dhaawaca saddex ruux taasi oo dhaawaca guud ka dhigtay Afar ruux oo shacab ah iyo dhimashada hal ruux oo dhammaantood Shacab ah.
Illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin Taliska ciidanka Jabuuti oo ku aaddan dhacdooyinka ka dhacay gudaha degmada Jalalaqsi waxaana xusid mudan in Dowladda Jabuuti ay hadda hayso Hoggaanka ciidamada shisheeyaha soo duulayaasha AMISOM isku magacaabay.